Blogger အသစ်များအတွက် Reader Acquisition နည်းဗျူဟာများ Martech Zone
သောကြာနေ့, မတ်လ 30, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဘလော့ဂ်ရေးတာကိုသတ္တိရှိဖို့လိုတယ်။ သင်၏အတွေးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုရေးသားထားသောမှတ်တမ်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုကသင့်အားချက်ချင်းလှောင်ပြောင်သရော်ရန်သို့မဟုတ်အလုပ်များစွာလုပ်ပြီးနောက်ရိုသေလေးစားမှုရရှိရန်လမ်းဖွင့်ပေးသည်။ အမှားတစ်ခုတည်းနဲ့အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ Awesome!
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ် ဘလော့ဂါ, Typepad or WordPress (အကြံပြုပါသည်) ထိုအခါသင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုထိုင်။ စဉ်းစားတွေးတောသည်။ သင့်ခေါင်းပေါ်တွင်ရာပေါင်းများစွာသောအတွေးအခေါ်များလှည့်ပတ်နေသည်။ သင်မည်သို့စတင်သနည်း ရှေးရှေးလူတွေကိုကိုယ့်ကိုလုပ်ပြီးအဲဒါကိုထပ်လုပ်ဖို့ပြောတယ် ငါကနဲ့စတင်ခဲ့တယ် နံနက်စာအတွက် Mountain Dew ကြော်ငြာကိုတင်ပါ။ မင်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပို့စ်ကိုကြည့်ရင်မင်းကနာမည်ကြီးနာမည်မဟုတ်ရင်နာမည်ဂုဏ်သတင်းသုညနဲ့စာဖတ်သူသုညဖြစ်နိုင်တယ်။
အကယ်၍သာ ငါယခုသိသောအရာကိုသာသိလျှင်နောက်ပို့စ်အနည်းငယ်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ငါသွားခဲ့တဲ့လမ်းကိုနောင်တမရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝယ်နိုင်မှာသေချာပါတယ်။ ငါစာဖတ်သူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မခံခဲ့ရ, ငါပဲနေ့တိုင်းသို့မဟုတ်ဒီတော့ရေးသားဖို့အသုံးပြုရန်ဖို့ကြိုးစားနေနှင့်အဘို့အခံစားမှုရဖို့ခဲ့သည်။ ငါလုပ်နိုင်သောပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းကြောင်းမှာအခြားဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုများရေးသားရန်ဖြစ်သည်။ ငါမစခင်ဘလော့ဂ်များစွာကိုဖတ်ခဲ့ဖူးပေမယ့်စကားမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး ငါပြုလျှင်, ပိုပြီးဘလော့ဂါများ နှင့် ဂုဏ်သတင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အရေးအသားကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။
သိမှတ်ဖွယ် #1 လတ်ဆတ်တဲ့တင်ပို့ချက်တချို့နှင့်အတူ၊ သင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကိုစတင်ရန်၊ အသုံးပြုရန်သေချာစေပါ trackBacks.
သင်၏ပထမဆုံးရေးသားချက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်သင်၏ရေးသားချက်များကိုဖတ်ရန်နှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုလာဘ်ထိုးခြင်း၊ တောင်းဆိုခြင်း၊ တောင်းပန်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာဖတ်သူတွေကစာဖတ်သူတွေကသင့် site ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ၊ ပြီးတော့သင့်ဘလော့ဂ်ကမှတ်ချက်ပေးထိုက်တယ်ဆိုတာကိုပေးတဲ့အတွက်မှတ်ချက်တွေကဘလော့ဂ်ကိုတကယ်ကိုယုံကြည်စေပါတယ်။ အခြားဘလော့ဂါများကိုသင်သိလျှင်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုသင့်အတွက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်နှင့် 'အချစ်အချစ်' ကိုချန်ရန်အားပေးပါ။
သိမှတ်ဖွယ် #2 မှတ်ချက်တချို့ကိုတည်ဆောက်ပြီးသင်သိတဲ့ဘလော့ဂါတွေဆီကလမ်းကြောင်းတချို့ရအောင်ကြိုးစားပါ။
ကောင်းပါပြီ၊ သင်အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီးလှပတဲ့ hawk ဆံပင်ပုံစံကိုရလိုက်ပြီ။ အခုတော့ ၀ တ်ဆင်ပြီးနှင်းသစ်ကိုပြဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်လူမှုရေးအမှတ်အသားပြုစာမျက်နှာများသို့သွန်းလောင်းပါ။ ငါ JD ကသူ့ဘလော့ဂ်ကိုဖွင့်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တုန်းက၊ စီးပွားရေး၌အနက်ရောင်MyBlogLog သို့ဝင်ရောက်ရန် JD ကိုရရှိခဲ့ပြီးသူ၏ဘလော့ဂ်ကို social bookmarking sites များတွင်တင်ခဲ့သည် StumbleUpon။ StumbleUpon သည်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရန်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ဖော်ပြချက်နှင့်အချို့သော tags များကိုရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အလားတူအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ StumbleUpon အသုံးပြုသူများသည်အလိုတော် ထိမိ။ လဲ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတင်ပြီးများသောအားဖြင့်ဘုံအကျိုးစီးပွားများကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်စွဲကပ်နေလိမ့်မည်။
သိမှတ်ဖွယ် #3 အချို့သောဘလော့ဂ်ကွန်ယက်များနှင့်လူမှုရေးအမှတ်အသားပြုသည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ၏အားသာချက်ကိုရယူပါ။
သင်ဆက်လက်စာရေးသည်နှင့်အမျှသေချာပါစေ သင့်ရဲ့ content တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်းသည် visitors ည့်သည်များအများဆုံးတွေ့နေသည့်ရေးသားချက်များနှင့် hits အများဆုံးနှင့်ရေးသားချက်များကိုသင့်အားပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတူယခုသင့်ဘလော့ဂ်တွင်ပါ ၀ င်မည့်လမ်းကြောင်းကိုပုံတစ်ခုရနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသွားပါ။ အဲဒီအစား (သင့်ရဲ့ content တွေကို clean up), သုတ်ခြင်း (အမှိုက်သရိုက် drop) နှင့်ထပ်လုပ်ပါ။ ဆက်လုပ်ပါ။ ရေးသားမှုပေါင်း ၅၀၀ နောက်ပိုင်းတွင်သင်မည်မျှအထိရရှိသည်ကိုသင်မယုံနိုင်ပါ။
သိမှတ်ဖွယ် #4 Lather, သုတ်ခြင်း။
နောက်ဆုံးအစွန်အဖျား။ ဒီနေရာမှာလက်ကိုင်စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိသည်။ သင်ကအမှတ်တံဆိပ်၊ နဖူးစည်းစာတန်းနှင့်အခြားမည်သည့်ဂရပ်ဖစ်ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့် 'Top Blogging' ဆိုသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမထားသင့်ပါ။ ဘလော့ဂ်ကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်လို့မရပါဘူး နာမည်ရရန်အချိန်ယူရမည်၊ စာဖတ်သူကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ယူရမည်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်သင်၏ 'ရှာဖွေနိုင်မှု' ကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ယူရမည်။ သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ဂရပ်ဖစ်ထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဘလော့ဂ်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်မည့်မည်သည့်ဘလော့ဂ် site ကိုမဆိုရှောင်ပါ။
သိမှတ်ဖွယ် #5 သင့်အကြောင်းဂရုမစိုက်တဲ့ crappy blogging aggregator ကိုသာကြော်ငြာသည့်သင်၏ site ပေါ်တွင်ဂရပ်ဖစ်များတင်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
မတ်လ 31, 2007 မှာ 3: 25 AM
ဂရိတ် Post ကို, Doug ။
မှတ်ချက်ကောင်းတွေချန်ထားခြင်းဟာစာဖတ်သူတွေကိုကောင်းကောင်းအကျိုးရှိစေပါတယ်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်တွင်ပထမဆုံးမှတ်ချက်ပေးသူဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုမှန်မှန်ဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ 😉
ငါမျှဝေနိုင်သည့်နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်တစ်ခုမှာသင့်အားဘလော့ဂ်ကိုထူးခြားသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖြင့်ပေးခြင်းပေးခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေခြင်း၊ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သော plug-ins များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သင်သည်များပြားသောပို့စ်များကိုရရှိသောအခါထိုအင်္ဂါရပ်များစွာသည်ပထမ ဦး ဆုံးအထောက်အကူဖြစ်သည်။
Doug ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင့်ဘလော့ဂ်တွင်စာဖတ်သူများအားသိမ်းဆည်းထားသည့်မက်လုံးအချို့ရှိသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ရှာဖွေရေးယန္တရားမှလာသည်၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရေးထားသောစာတစ်စောင်တည်းသာဖတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ပို့စ်များ၏အဆုံးတွင်ဆက်နွယ်သောစာမူအချို့ကိုပြပါက၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်ကြာကြာနေလိမ့်မည် ပြန်လာလွန်း!
မတ်လ 31, 2007 မှာ 9: 11 AM
ဒါအကြံဥာဏ်ကောင်းပါ။ ငါသည်သင်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်ကိုမသိခဲ့ပါ ... တကယ်ကိုအေးမြ! ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်ဖတ်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်!
မတ်လ 31, 2007 မှာ 4: 46 AM
အရှုံးမပေးပါနှင့် သင်ကအအေးခန်းနံရံနဲ့စကားပြောနေသလိုခံစားရတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ လူတွေကတုံ့ပြန်မှုမပေးရင်တောင်မှနားထောင်၊ စောင့်နေကြတယ်။ ဆက်လုပ်ပါ
ငါ့ဒေါ်လာ ၀.၀၂ 0.02
မတ်လ 31, 2007 မှာ 9: 14 AM
ထို ၀.၀၂၂ သည်ဒေါ်လာသန်းတစ်သောင်းတန်သည်။ ဘလော့ဂ်ဂါများကသူတို့မဖြေနိုင်သည့်အရာကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာသင့်ဘလော့ဂ်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏ ၉၈% မှ ၉၉% (စာသားအရအချို့သောအချက်များကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပြီ) သည်ဘယ်သောအခါမှထင်မြင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ရှေးရှေးစာဖတ်နေတာကိုသတိရပါ။
ဒါဟာမာရသွန်မဟုတ်ဘူး၊ Sprint မဟုတ်ဘူး။
မတ်လ 31, 2007 မှာ 1: 56 pm တွင်
Doug, မင်းရဲ့ထောက်ခံမှုကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ မင်းရဲ့လမ်းပြမှုတွေနဲ့အတူငါကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ အဓိကအချက်ကအတွေ့အကြုံပိုများတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုသင်မှန်မှန် ဦး ဆောင်နေတယ်၊ ​​ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရူးလုပ်နေတာကိုနားလည်အောင်ကူညီဖို့အတွက်စတာအတွက်ကူညီပေးတယ်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အခြားဆိုဒ်များကိုမှတ်ချက်ပေးပြီးသင့်ကိုယ်သင်သိစေပါ။ အကြိမ်ရေနှင့်အတူ post နှင့်သင်၏နှလုံးသငျသညျသယ်ဆောင်ဘယ်မှာသွား။ ငါ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘလော့တစ်ခုရှိသော်လည်းအားကစားနှင့်ပတ်သက်သောနိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့လမ်းညွှန်နဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကမ္ဘာမှာနံပါတ် ၃၀၀၀ Doug Karr ပါ။ သူ့ဘလော့၏စာဖတ်သူကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာနှုန်းဖြင့်ကြည့်ရတာပျော်စရာပါပဲ။
မတ်လ 31, 2007 မှာ 2: 01 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် JD! ငါသူနဲ့အလုပ်လုပ်ရန်စူပါစတားရရှိသည့်အခါနည်းပြ၏အလုပ်အမြဲလွယ်ကူထင်!